Nld — Blogs, Pictures, and more on WordPress
» Nld	婚前世界放浪記　English
I am Glad I Came to Myanmar “I Love This Country!”
I fell in love with Myanmar. The people always quietly but warmly smiled to me. Yangon was filled with energy of the venders, shoppers, monks, kids, and men drinking tea or working. 424 more words
MYANMAR BURMA : Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်မှ Digital Media မိတ်ဆက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလိုပဲ ပြောပါမယ်။ ကျေးဇူးတင် စကားဆိုတော့ အခုကြွရောက် ချီးမြင့်တဲ့ ပရိတ်သတ် အားလုံးကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ EMG စတင်တည်ထောင်စဉ် ကတည်က အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ၊ ကြော်ငြာရှင်တွေ၊ အားပေးတဲ့ သတင်း source တွေ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ကောင်းတူဆိုးဘက် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျွန်တော့်တို့ အပေါ်မှာ အမြဲတမ်း အားပေးခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ ဒီဂျစ်တယ်မိဒီယာ ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ Generation ပေါ့။ အခု ကျွန်တော် အသက် ၅၀ ရှိပြီ။ လိုက်မမီပါဘူး။ အခု Generation က Third Generation ပေါ့။ Third Generation ကို လိုက်မီဖို့ ကျွန်တော် ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာကို မိတ်ဆက်ရတာပါ။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တဲ့ဟာကတော့ သတင်းမီဒီယာကတော့ သတင်းစာရဲ့ သြဇာတိကမနဲ့ သတင်းစာရဲ့ ပျံ့နှံ့ထိုးဖောက်ပုံ သတင်းစာရဲ့ အရေးပါတဲ့ သြဇာတိက္ကမကိုပဲ ယုံကြည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့တာပါ။
Help Us Make the Film - Burma's Voices of Freedom Fund the film “Aung San Suu Kyi & Burma’s Voices of Freedom,” offered freely to reformaConstitution banning Suu Kyi from President.
Jodene Fine, assistant professor of school psychology in Michigan State University’s College of Education, explains the new research here:
Icons and Optimism in Burma “So, what do you think of ‘The Lady’?” my neighbor on the train asked me. He looked around conspiratorially before he asked –ahabit left over from an all-to-recent era of government repression and undercover informants. 1,077 more words
U WIRA THU: “အင်္ဂလန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ သဘောထား10.1.2013 ရက်စွဲပါ Reporter ဂျာနယ်လ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။ 10.1.2013 ရက်စွဲပါ Reporter ဂျာနယ်လ်မှာ ပါလာတဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။
TIME မဂ္ဂဇင်းကို ငွေပေးရေးခိုင်းတာ မူဆလင်မဟုတ်ဘဲ ဗမာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သေချာရင် မူဆလင်တွေ အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှား ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့အတွက် ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးပါဘူး။ 11 more words
? NLD denies Suu Kyi planning to visit China- delegation leaves Myanmar on November 17 CREDIT EMG
NAY PYI TAW—The spokesperson for the opposition National League for Democracy (NLD) has denied reports that the party leader will be visiting China, adding that no official invitation has been received. 659 more words